Poll Results Stories U-Report အကြောင်း Engagement Reports U-Talk Videos
Engagement U-Report အကြောင်း Reports U-Talk Videos Join Now
U-Reporter တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေမှာ ပါဝင်လိုက်ပါ
Poll on Violence against Women 2021 (Burmese)
Poll on Violence against Women 2021 (English)
Poll on Self-Love Self-Care
Poll on Primary Health Care 2021(English)
Poll on primary Health Care (2021)
Poll on New Year, New Hope (English, 2022)
Poll on New Year, New Hope (2022)
Poll on Resilience (Myanmar)
Career Dreams among young people (Myanmar)
Poll on Safer Internet (2022)
Poll on Self-Love Self-Care - (Health)
Poll on Safer Internet (2022) - (Youth & Digital)
Poll on New Year, New Hope (English, 2022) - (U-Reporters in Myanmar)
Poll on New Year, New Hope (2022) - (U-Reporters in Myanmar)
Poll on Primary Health Care 2021(English) - (Health)
Poll on primary Health Care (2021) - (Health)
Poll on Resilience (Myanmar) - (Youth)
Poll on Violence against Women 2021 (Burmese) - (Gender)
Poll on Violence against Women 2021 (English) - (Gender)
Career Dreams among young people (Myanmar) - (Youth)
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်ခြင်း ဂရုစိုက်ခြင်း ဆိုတာ ကို သူငယ်ချင်း ဘယ်လို နားလည်ပါသလဲ?
3292 responded out of 3475 polled
သူငယ်ချင်းက ကိုယ်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်တက်တဲ့သူလား။ ဘယ်လိုလူမျိုးလို့ ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားသလဲ။
3252 responded out of 3350 polled
သူငယ်ချင်းမှာ သီးသန့်ကိုယ်ပိုင် Self-Care plan သတ်မှတ်ထားတာမျိုး ရှိလား။
3130 responded out of 3305 polled
ဒီတော့ သူငယ်ချင်း အနေနဲ့ အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန် ညီညီမျှမျှ ထားနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။
3041 responded out of 3191 polled
တစ်ပတ်မှာဆိုရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ဖို့ သီးသန့် အချိန်ဘယ်လောက်ပေးဖြစ်လဲ?
2906 responded out of 3097 polled
သူငယ်ချင်းကို စိတ်ပင်းပန်းကိုယ် ပင်ပန်စေတဲ့ သတ်‌ရောက်မှုများကဘယ်လိုအရာတွေဆီကလာတယ်ထင်သလဲ။
2768 responded out of 2956 polled
သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်အတွင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ဖို့ အတွက် ဘာတွေ လုပ်လေ့ရှိလဲ။
2701 responded out of 2812 polled
U-Report အကြောင်း Engagement Bots Reports